Enrique: Ingiriisku Dagaal Bay Kula Jiraan Suarez
HomeWararka MaantaEnrique: Ingiriisku Dagaal Bay Kula Jiraan Suarez
Tababaraha kooxda Barcelona, Luis Enrique ayaa ku eedeeyey warbaahinta dalka Ingiriiska in ay wadaan olole ka dhan ah laacibka kooxdiisa ee Luis Suarez kadib markii ay soo bandhigeen sawirro muujinaya in uu qaniinay Matin Demichelis kulankii Champions League ee Salaasadii toddobaadkii hore.
Suarez ayaa ku laabtay Ingiriiska markii u horeysay tan iyo markii uu ka tegay Liverpool bishii July ee sannadkii hore, waxaanu Manchester City ka dhaliyey laba gool oo ay guushu ku raacday Barcelona lugta hore ee wareegga 16ka ee Champions League.
Markii ay dhamaatay ciyaartaasi waxa ay warbaahinta Ingiriisku bartilmaameedsadeen dhaqdhaqaaqii uu sameeyey Suarez intii ay ciyaartu socotay, waxaanay soo bandhigeen muuqaallo ay ku sheegeen Suarez oo qaniinaya Demichelis, hase yeeshee ciyaartoyga ayaa beeniyey.
Haddaba, tababaraha Barcelona, Luis Enrique ayaa markiisa u istaagay in uu difaaco Suarez, waxaanu ku weeraray saxaafadda Ingiriiska in ay dagaal kula jiraan laacibkan.
“Nasiib darro, wax iska caadi ah ayay ka noqotay qaybo dunida ka mid ah in ololahan oo kale oo ka dhan ah shakhsi uu ka dhaco. Suarez wuu sii ogaa in marwalba la daawanayo marar horena wuu sheegay in uu khaladaad sameeyey.
“Ololahan oo kale waxa aynu ku aragnay ciyaartooyo, madaxweyne iyo taageereyaal oo lagu cambaaraynayo” ayuu yidhi tababare Enrique.
Barcelona ayaa is-aragga labaad ee ciyaarta Champions League ee Manchester City ku martigelin doonta garoonkeeda Camp Nou Arbacada March 18.
Chelsea Oo Quudaraynaysa Helitaanka Gonzalo Higuain, Alvaro Morata iyo Lukaku
All Goals & Extended Highlights : Tottenham 3-2 Real Madrid – UCL
Fifa Oo Platini Ka Ganaaxaysa Shaqada Kubada Cagta Inta Noloshiisa Ka Dhiman